जीवनमा सफल हुनको लागि हरेक दिन यसरी गर्नुहोस् भगवानको पुजा ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जीवनमा सफल हुनको लागि हरेक दिन यसरी गर्नुहोस् भगवानको पुजा !
काठमाडौं । आजको दिन हर कसैंले भाग्यमा विश्वास गर्दछ । हरेक दिन रहने हरेक बार कुनै न कुनै ग्रहसंग जोडिएको हुन्छ। हरेक बार असर रहने ग्रहको असर सामान्य बनाउनको लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। सप्ताहको सातै दिन ग्रहको शुभ असर प्राप्त गर्नको लागि ज्योतिष शास्त्रमा केहि उपायहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन् । कुन बार कुन ग्रहको असर हुन्छ भन्ने समेत ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कुनबार के उपाय प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यस लेखमा बताउने छौँ।आइतबारः आइतबारलाई सूर्यदेवसँग जोडिएको बारको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा सुर्यदेवलाई प्रसन्न गर्नको लागि प्रतिदिन सूर्योदयको समयमा जल अ’र्पित गर्नु पर्ने हुन्छ। दैनिक यस्तो कार्य गर्न स’म्भव नहुनेहरुको लागि भने आइतबार यसो गरेमा यश साथै किर्ति बढेर जाने हुन्छ।
सोमवारः ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सोमबारलाई चन्द्रसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यदि कोहि व्यक्तिको कुण्डलीमा चन्द्रमा खराब स्थिति रहेका त्यस व्यक्ति प्राय जस्ती बि’मार पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारका मानिसहरुले सोमबारको दिन शिवलिंगमा जलाभिषेक गर्नु पर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै दुधले अभिषेक गरेमा अझै राम्रो हुने मानिन्छ। महामृ’त्युंजय मंत्रको पाठ गर्नु भएमा पनि उचित रहन सक्ला।
मंगलवारः मंगल ग्रहलाई ज्योतिष शास्त्रमा क्रुर ग्रहको रुपमा मानिने गरिन्छ। क’लहको कारक ग्रह मानिने मंगल ग्रहलाई स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। मंगल ग्रह खराब स्थितिमा रहेको अवस्थामा मंगलबार पारेर हनुमान जीको आराधना गर्नु पर्ने हुन्छ। यस दिन गरिबलाई खान दिनु भएमा पन इ मंगल ग्रहको ख’राब अ’सर हटेर जाने विश्वास गर्ने गरिन्छ।
बिहिबारः बिहीबारको दिनलाई बृहस्पति ग्रहसँगजोडेर हेर्ने गरिन्छ। अशुभ बृहस्पतिका अ’सरका कारण धेरै कोशिस गर्दा पनि कहिले पनि सफलता नमिल्ने हुन्छ भने अकालमा मृ’त्यु समेत हुने गर्छ। बृहस्पतिको असर काम गर्नको लागि बृहस्पतिलाई पहेंलो वस्तुहरू, पहेंलो फलहरू, पहेंलो कपडाहरू अर्पित गर्नु पर्ने हुन्छ।
सडकमा नै खेत रोप्नेजस्तो हिलो देखेपछि दिक्क बनेका बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्णले यसरी गरे ब्यग्य,
युवाहरुको कमि भएपछी युवतीहरु विवाहित पुरुषको कान्छी, माईली, साईली दुलहीसम्म बन्न तयार रहेका छन् ।
“अस्ट्रे’लि’याको सि’ड्नीमा २१ वर्षीया महिलाको …. भिडियो निकै भाइरल “(भिडियो सहित )”
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर देउवाले भने : कोरोना नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति बनाउनुस्
जस्तो सुकै बिजी भएपनि एक पटक अवश्य पढ्नुहोला , नपढे हजुरलाई पछुतो हुनेछ।